Home » Ny olona ao amin'ny Travel & fizahan-tany » Wharf Hotels dia manendry Tale Jeneraly vaovao an'ny The Murray, Hong Kong, Hotely A Niccolo
Ny Wharf Hotels dia faly nanambara ny fanendrena an'i Adriano Vences ho Tale Jeneralin'ny The Murray, Hong Kong, hotely Niccolo. Taorian'ny fitarihana ny fahombiazan'ny hotely Niccolo voalohany tany Chengdu, dia hanohy hanorina eo amin'ny mariky ny The Murray i Adriano amin'ny maha hotely an'izao tontolo izao manana loka sy fankasitrahana bebe kokoa eo amin'ny sehatra manerantany. Manararaotra izany ihany koa izahay misaotra ilay hotely fanta-daza, Duncan Palmer tamin'ny fanokafana mialoha sy fanokafana nataony hitondra ity mari-pamantarana malaza ity, ary mirary ny fahombiazana rehetra ho azy amin'ny asany amin'ny ho avy.
Ny dian'i Adriano miaraka amin'ny Wharf Hotels dia nanomboka ny taona 2009, ary natokana ho General Manager an'ny Niccolo Chengdu, trano fandraisam-bahiny voalohany manana marika mihaja vaovao an'ny vondrona, tamin'ny taona 2015. Nitarika ny ekipa Niccolo Chengdu nahatratra ny laharana voalohany tamin'ny RGI (Revenue Generated Index) manohitra ny fifaninanana haitraitra an-trano ao anatin'ny sivy volana monja taorian'ny nisokafan'ny trano fandraisam-bahiny, dia niavaka indrindra ho an'ny vondrona. Androany, Niccolo Chengdu dia manohy mametraka ny hafainganana amin'ny toeran'ny mpitarika amin'ny fizarana tsena sy ny fahafaham-pon'ny vahiny.
Nandritra ny 3 taona mahery niainan'ny indostria tany amin'ny toerana tena sarobidy toa an'i Singapore, India, Dubai, Mexico ary Chile, niverina tany Hong Kong ilay teratany Portiogey taorian'ny faha-efatra taonany niasa tany Chengdu. Miaraka amin'ny fahatakarany lalina ny volavola sy kolontsaina mampiavaka ny faritra, dia nanolo-tena i Adriano hanandratra sy hanao mpisava lalana ny traikefa fandraisam-bahiny tsara indrindra ao The Murray. “Tena nahafaly ahy ny niverina tany an-tanàna ary niditra ho anisan'ny sahanin'ny Hotely Niccolo. Ny Murray dia eo amin'ny toerana tsy manam-paharoa manolotra kapitenin'ny indostria sy ny mpitarika amin'ny endriny fitoerana masina ankehitriny ao afovoan'i Hong Kong. Manantena ny hifandray indray amin'ny sehatry ny asa aman-draharaha sy ny tsenan'ny fialam-boly eto an-tanàna aho, ary hiantohana ny The Murray izay hotely maneran-tany azon'ireo mponin'i Hong Kong atao mba ho lasa iray amin'ireo hotely malaza eto amin'izao tontolo izao, ”hoy i Adriano.
Dr Jennifer Cronin, filoha, Wharf Hotels, dia niarahaba ny hotely efa za-draharaha tamin'ny nanendrena azy, "Ny fananana traikefa nananan'i Adriano niasa tamina trano fandraisam-bahiny nalaza eran-tany sy ny fahombiazany tamin'ny asany teo aloha teo amin'ny vondrona dia nahatonga azy ho mendrika an'io andraikitra lehibe io. Manantena ny hamoaka toko vaovao momba ny fampandrosoana izahay ary hahita fahombiazana bebe kokoa ho an'ny The Murray. ”